Ogaden News Agency (ONA) – Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo Lacag Cusub Daabacaya.
Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo Lacag Cusub Daabacaya.
Guddoomiyaha Bankiga dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Bangigu uu ku howlan yahay soo daabicista lacag cusub oo shilin Soomaali ah, taas oo wax looga qaban doono lacagaha been abuurka ah ee dhibaatada ku haysa suuqyada wadanka.
Wuxuu xusay in laamaha Bankiga Dhexe ee magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo la diyaariyay isla markaana meelaha kale gacanta lagu hayo goor dhowna la dhameystiri doono. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladda sameyn doonto lacag ka yar Kunka Shilin, hase ahaatee waqtigana la diyaariyay oo kaliya Kunka Shilin.
Mudane Bashiir Ciise Cali, Guddoomiyaha Bankiga Dhexe ayaa sheegay dadka sameeya lacagaha been abuurka ah ee loo ekaysiiyey Kunka Shilin iyo inta ku gacansiisa ay dalka iyo dadka dambi ka galeen, cidii lagu soo qabto iyada oo gacanta kula jirta samaynta laacagtaas sharciga la horgeyn doono.
Mudooyinkii dambe waxaa sare u kac laga dareemayey qiimaha quudul daruuriga ee suuqyada dalka, taas oo loo aaneeyey lacago badan oo suuqyada soo galay lacagtaas oo u badneeed mid been abuur ah waxayna keentay in ay gobolo badan oo koofurta iyo bartamaha laga diido lacagtii Shilin Soomaaliga aheyd.